i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-ODI series e-India
The Momentum Proteas celebrate
eGoli: i-Cricket South Africa (CSA) ihalalisele ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-One-Day International Series behlula i-India ngeSonto.
i-South Africa ingaphambili ngo-3-1 kwi-series enemidlalo emihlanu njengoba banqobe umdlalo wesine ngezinti eziyisikhombisa bejaha umphumela oyirekhodi e-Ekana Cricket Stadium e-Lucknow.
Abadlali ba-Hilton Moreeng banqobe umdlalo wokuqala nowesithathu ngezinti eziyisishagalombili nama-runs ayisithupha (DLS Method), ngaphambi kwempumelelo edlule, okusize baphinde impumelelo yabo kuma-series behlula ama-Indians kuhambo ngo-2014.
“Halala kuma-Momentum Proteas ngokunqoba i-series enhle behlula i-India,” kusho i-CSA Director of Cricket u-Graeme Smith. “Eyodwa yezindawo ezinzima emhlabeni ukuzivakashela futhi ukuthi abadlali bethu bayekhona bahlula iqembu lasekhaya kubo, kusele umdlalo owodwa impumelelo enkulu, engeke ibekwe kancane.”
“Sibone umqeqeshi u-Hilton ehambisa iqembu lakhe e-New Zealand ngonyaka odlule futhi banqoba i-series. Balandelisa lokho ngokuhlula i-Pakistan ekhaya ngoJanuwari futhi manje baye e-India futhi banqobe i-ODI series yesithathu kulandelana. Kukhombisa ukukhula kweqembu. Bayaqala bayaqhakaza ngesikhathi lapho umdlalo wabesifazane uqala ukhula futhi sibajabulela kakhulu.”
i-CSA Acting Chief Executive Officer, u-Pholetsi Moseki enezezela: “Usuku lokuziqhenya kuwona wonke ama-South Africans. Ama-Momentum Proteas enze umsebenzi oncomekayo ukuhlula i-India Women e-India. Ukwenza lokhu ngo-2014 kwaba impumelelo enhle, kodwa ukubuya futhi bakuphinde eminyakeni elandelayo impumelelo enhle.”
“Kumele sikhumbule ukuthi bangaphandle kokapteni wabo olimele u-Dane van Niekerk, kodwa engekho kuqhakaze okapteni besikhashana u-Sune Luus no-Laura Wolvaardt. u-Lizelle Lee udlale kahle ngokushaya futhi ukwesekwa abamkakile njengo-Lara Goodall, u-Mignon du Preez kanye nabashwibayo kwenzekile.”
i-ODI series izophethwa e-Lucknow ngoLwesithathu.
u-Goodall uhlanganise umjaho oyirekhodi njengoba i-SA ithuse i-India ukuqoba i-series Ukubuya kwa-Kapp no-Chetty kuqinisa ama-Proteas u-Lee no-Luus bashaye ama-Proteas anqoba ngerekhodi